Oku kulandelayo isishwankathelo solwazi malunga neendleko zemali zengeniso eziphantsi kwezindlu ezifumanekayo kubantu okanye kwiintsapho ngokusebenzisa inkqubo yoPhuhliso lwaseMaphandleni yaseSebe lase-United States njengoko kubhalwe kwiKhathalogi yoNcedo lweZindlu zasekhaya (CFDA).
Ngethuba lonyaka-mali ka-2015, i-$ 18.7 yezigidigidi zeemali-mboleko zinikezelwe. Umyinge obolekileyo obolekileyo wanikezelwa ngu-$ 125,226 ngelixa umboleko oqinisekileyo owenziwe ngu-136,360.
Ukuncedisa kakhulu umvuzo ophantsi, umvuzo ongezantsi, kunye nemali engenamathotho-mali yokufumana indlu efanelekileyo, efanelekileyo, ekhuselekileyo nekhuselekileyo yokusetyenziswa njengendawo yokuhlala isigxina kwimimandla yasemaphandleni.
Imali-mboleko; Imali-mboleko eqinisekisiwe.
Ukusetyenziswa kunye nezithintelo
Iimali-mboleko ezichanekileyo kunye eziqinisekileyo zingasetyenziselwa ukuthenga, ukwakha, okanye ukuphucula indawo yokuhlala yokuhlala ngonaphakade. Amakhaya amatsha akhutshwayo angakhokhelwa ngemali xa esesisigxina, esithengwa kumthengisi ogunyazisiweyo okanye kwikontrakta, kwaye uhlangabezana nezinye iimfuno. Ngaphantsi kweemeko ezincinci, amakhaya angahlawulwa kwakhona ngemali-mboleko ngqo. Imimiselo yezemali kufuneka ihlambuluke, ihlonipheke, ikhuselekile kwaye ihlanzekile. Ixabiso lekhaya elixhaswe ngemali-mboleko ngqo lingaze lidlule umda wendawo. Ipropathi kufuneka ibekwe kwindawo esemaphandleni efanelekileyo. Uncedo lufumaneka kwi-States, i-Commonwealth yasePuerto Rico , ii-Virgin Islands zase-US, i-Guam, i-American Samoa, i-Commonwealth yaseMntla Mariana, kunye neTree Territories ye-Pacific Islands.
Iimali-mboleko ezizenzekelayo zenziwe ngenani lentlawulo echazwe kwi-RD Isiyalo 440.1, umboniso B (ufumaneke kuyo nayiphi na iofisi yezoPhuhliso lwasekuhlaleni), kwaye ibuyiselwa ngaphezu kweminyaka engama-33 okanye iminyaka engama-38 kubafaki-zicelo abaye bafumana ingeniso yonyaka engaphelelanga kuma-60 ekhulwini kwendawo ingeniso, ukuba kuyimfuneko ukubonisa amandla okubuyisela.
Uncedo lwentlawulo lunikezelwa kwiimali-mboleko ezichanekileyo zokunciphisa isitolimende "kwizinga lentsebenzo elisebenzayo" eliphantsi kwepesenti enye, kuxhomekeke kwingeniso yentsapho ehlengahlengisiweyo. Uncedo lwentlawulo luya kuhlaziywa nguRhulumente xa umthengi engasayi kuhlala kwindawo yokuhlala. Akukho mali ehlinzekwe ngumbuso wokubolekwa kwempahla okanye iimali-mboleko zokuxhaswa kwemali. Iimali-mboleko eziqinisekisiwe zingenziwa ukuba zihlaziye iimali-mboleko ze-RHS zezindlu eziqinisekisiwe okanye i-RHS Isiqendu 502. Iimali-mboleko eziqinisekisiwe zihlawulelwe ngaphezu kweminyaka engama-30. Inqanaba lomdla lithethathethwano kunye nomboleki.
Abafake izicelo kufuneka babe nemali ephantsi kakhulu, ephantsi okanye ephakathi. Ingeniso ephantsi kakhulu ichazwe njengengaphantsi kwe-50 ekhulwini yemali engenayo yomyinge (AMI), umvuzo ophantsi ophakathi kwama-50 no-80 ekhulwini we-AMI; Ingeniso engamanani ingaphantsi kwama-115 ekhulwini we-AMI. Imindeni mayibe nezindlu ezaneleyo, kodwa ikwazi ukuhlawula iintlawulo zezindlu, kubandakanywa nenqununu, inzala, irhafu kunye ne-inshurensi (PITI). Ukulinganiswa kwemilinganiselo yokuhlawula i-29% yePITI ukuya kuma-41 ekhulwini kwiityala ezipheleleyo. Ukongeza, abafake izicelo kufuneka bangakwazi ukufumana iitaliti kwenye indawo, kodwa banokwamkeli-mvume eyamkelekileyo.
Abafake izicelo kufuneka bahlangabezane neemfuno zokufaneleka.
Iziqinisekiso / amaxwebhu
Abafake izicelo bangadinga ukungenisa ubungqina bokungakwazi ukufumana iitaliti kwenye indawo, ukuqinisekiswa kwengeniso, amatyala kunye nolunye ulwazi malunga nesicelo; izicwangciso, iinkcukacha, kunye neendleko zokuqikelela. Le nkqubo ingabandakanywa kwiinkcazo ezingaphantsi kwe-2 CFR 200, i-Sub -part E-Costs Principles.
Le nkqubo ingabandakanywa kwiinkcazo ezingaphantsi kwe-2 CFR 200, iimfuneko zoLawulo olufanayo, iMigqaliselo yeNdleko, kunye neemfuneko zoPhicotho kwieSigungu zama-Federal. Ukubolekwa kwemali-mboleko ngqo, isicelo senziwa kwi-ofisi yeeNkonzo zoPhuhliso lwaseMaphandleni ekhonza kwindawo apho kuhlala khona okanye kuya kubakho. Iimali-mboleko eziqinisekisiwe, isicelo senziwe kumbolekisi wabucala obandakanyekayo.
Iiofisi zasemaphandleni zoPhuhliso lwaseMaphandleni zinamagunya okuvuma iimfuno zokubolekisa ngemali.
Ukucwangciswa kwemali-mboleko eqinisekisiwe kuyahluka kwiPhondo ngalinye. Qhagamshelana nomnxeba wengingqi yakho phantsi kweSebe lezoLimo lase-US kwi-ofisi ye-ofisi yoPhuhliso lwendawo yasemaphandleni okanye tyelela i-website http://offices.sc.egov.usda.gov/lcoator/app kuluhlu lweHhovisi likaRhulumente. Ukuba akukho lukholo olukhoyo, izigqibo malunga nezicelo ezibolekileyo zemali mboleko zenziwe zingakapheli iintsuku ezingama-30 ukuya kwii-60. Izicelo zemali-mboleko yesigunyaziso zenziwa kwiintsuku ezi-3 emva kokufumana isicelo somnini-mboleko sesiqinisekiso.
Ubume bokuvunyelwa / Isikhathi sokungaxhaswanga
Iimali-mboleko ezithe ngqo, ukusuka kwiintsuku ezingama-30 ukuya kwii-60 ezixhomekeke ekufumanekeni kweemali, ukususela ngexesha isicelo sifakwa ukuba akukho sikhokelo sezicelo ezikhoyo. 'I-pre-qualification' ingahanjiswa kubafake izicelo ezibolekileyo kwiimfono okanye ba tyelele iofisi yokuPhuhliso lwamaPhandle, nangona iziphumo azibopheli. Ukuqinisekisa, kufuneka isigqibo kwisithuba seentsuku ezi-3 zokungeniswa kwemboleko yemboleko ngomthengisi ovunyiweyo.
I-Ofisi yesithili okanye yeNgingqi Qhagamshelana nomnxeba wakho wefowuni ngaphantsi kweSebe lase-United States leSebe lezoLimo kwiNombolo yeofisi ye-ofisi yoPhuhliso lwasekuhlaleni Ukuba akukho luhlu oluthile, qha ga mshelana ne-Ofisi yoLuntu oluPhuhliso lwaseMaphandleni oludweliswe kwisiHlomelo IV seKhathalogi okanye kwi-intanethi kwi-http: //www.rurdev.usda.gov/recd_map.html.
I-Ofisi yoMlawuli weKomkhulu, uLawulo lweZindlu zoLuntu oluLawuliweyo okanye uMlawuli weZindlu zoLuntu oluQinisekisiweyo, iNkonzo yezoLimo yaseRural (RHS), iSebe lezoLimo, iWashington, DC 20250. Ifowuni: (202) 720-1474 (imali-mboleko ngqo), (202). ) 720-1452 (imali ebolekileyo).
Imiyalezo yokulandelela esuka kwiGalaxy's Core
I-Top 3 zesiNgesi zesiJapan eziDekisi
I-Chemistry Izibhalo Ukuqala ngeNcwadi E
ISL ISigama IsiCwangciso seSifundo - Ukuchasene neNqanaba lokuQala abafundi